I-Lorenz Snack-World. Umlando ocebile nezinhlelo ezinkulu ngekusasa - umagazini i- "Potato System"
ILorenz Snack-World iyinkampani yomndeni ezimele, engomunye wabaholi emakethe yokudla okulula yaseYurophu. Senza futhi sithengise ama-chip, ama-straws anosawoti nama-pretzels, ama-extruders, ama-crackers namantongomane emazweni angaphezu kwama-80. Balinganiselwa ku-2400 XNUMX abasebenzi basendlunkulu eNeu-Isenburg (ngaseFrankfurt) nasezinkampanini ezingaphansi kweJalimane, i-Austria, iPoland neRussia ababamba iqhaza ekuthuthukiseni lo mkhiqizo.
Le nkampani ihlehlela emuva ngonyaka we-1889, lapho umsunguli wayo uHermann Balsen ethola amalungelo efektri yeFabrikgeschäft englische Cakes und Biscuits. Uqambe inkampani entsha ngokuthi yiHannoversche Cakesfabrik H. Bahlsen. Ekuqaleni, umkhiqizo wawusebenzisa abantu abayishumi kuphela.
Ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX, ifektri yethula umugqa wokuqala wokupakisha eYurophu.
Ngo-1919, ifektri yadlulela emadodaneni kaHermann Balsen: uHans, uWerner noKlaus. Ithimba labaholi abasebasha lenze ukuthuthukiswa kwenkampani nokwakhiwa kabusha kwayo. Ngalesi sikhathi, ukudla okulula okunosawoti kuyathandwa kulayini womkhiqizo.
Ngo-1935 inkampani yaqala ukukhiqiza izinti zeSalzletten ezivela eBalsen (namuhla - izinti zakudala zeSaltletts). Iresiphi yabo ilethwe nguKlaus Balsen ohambweni lwakhe oluya e-USA.
Ngo-1951, ifektri yethula umkhiqizo wokuqala ozenzakalelayo wama-chips eYurophu! Ngalesi sikhathi, ama-chips athola ukuthandwa okukhethekile emazweni aseYurophu (kufaka phakathi ngenxa yokuba khona kwamasosha aseMelika). Unjiniyela waseJalimane uHeinz Flessner usungula uFlessner KG eNeu-Isenburg futhi unikeza Amasosha aseMelika izipisi zokuqala ezivela eJalimane.
Ngo-1963, ifektri yethula i-ErdnußLocken extruders yokuqala egobile emakethe yaseJalimane! Lokhu kudla okulula okumnandi kuthengisiwe eFrance kusukela ngo-1960 ngaphansi komkhiqizo weCurly.
Ngenxa yokuthengwa kwamasheya enkampanini yaseHamburg "Liebelt", ukuhlanganiswa kwenkampani kuyanda, futhi kuvela amantongomane kuwo.
Ngo-1964, iHermann Balsen Factory ithenga amasheya eFlessner KG eNeu-Isenburg futhi ithengise imikhiqizo yayo ngaphansi kwegama layo.
Ngo-1968 inkampani ivula ifekthri yesimanje kunazo zonke eYurophu eNeunburg, eJalimane.
Ukuze kuhlangatshezwane nesidingo esikhulayo samazambane amazambane, kwakhiwa ifektri yesibili ngo-1972 eHankensbüttel, eJalimane.
Ngo-1974-75, amadodana kaWerner Balsen uLorenz noWerner bajoyina le nkampani.
I-1985 Balsen ithola amasheya asele kaFlessner.
Ngo-1992, le nkampani yathola umkhiqizi wokudla okulula wasePoland u-Unimarex, kusukela lapho uBalsen aqala khona ukutshala imali kwakhe ezimakethe ezikhulayo zaseMpumalanga naseNingizimu yeYurophu.
Ngonyaka ofanayo, inkampani yethule ukukhiqizwa kweCrunchips, inkampani esayibiza ngalo mkhiqizo njengobaluleke kakhulu kuyo.
Ngo-1993, i-Balsen Group of Companies yashintsha isakhiwo sayo futhi yakha izingxenye ezimbili: "Amaswidi" kanye "Nokudla okulula". Inkampani yokudla okulula isebenza ngokuzimela ngaphansi kwegama layo: iBahlsen Picanterie.
Ngawo lowo nyaka, kwethulwa iNicNac's, uphawu lokuqala oluzimele emakethe yamantongomane.
Ngo-1999, ibhizinisi lokudla okulula lazimela: inkampani ezimele ngokuphelele "iLorenz Bahlsen Snack-Group" yavela nendlunkulu eNeu-Isenburg, eJalimane.
Ngo-2001, ilogo yeBahlsen Picanterie ithathelwa indawo yilogo yeLorenz Snack-World.
Isigaba sokumaketha nokuthengisa sivulwa e-Austria, esiqondisa umsebenzi wenkampani hhayi e-Austria kuphela, kodwa naseBalkan. Ihhovisi lenkampani liseKlagenfurt.
Ngo-2003 uSalzletten waqanjwa kabusha ngokuthi iSaltletts. ILorenz Snack-World yethula umkhiqizo wesambulela esisha, lapho kwethulwa khona imikhiqizo emisha sha, njengezinti zeSaltletts ezinembewu yesame.
Ngo-2006, kwasungulwa ilogo entsha yesimanjemanje yeLorenz Snack-World, okuyinto, njengakuqala, esebenzisa ifonti ebhalwe ngesandla, egcizelela ukuqhubeka nomsebenzi womnikazi wenkampani iLorenz Balsen ngekhwalithi yayo yonke imikhiqizo.
Ngawo lowo nyaka, umkhiqizo wavulwa embonini entsha yesimanje eStanowice, ePoland. Ukutholwa kwePolsnack kuqinise isikhundla sikaLorenz Snack-World emakethe yasePoland yokudla okulula.
Umsebenzi webhizinisi eRussia uyathuthuka ngokuvulwa kweLorenz Snack-World Russia, isigaba sokukhangisa nokuthengisa seLorenz Snack-World, eSt.
Manje inkampani ikhiqiza ukudla okulula okunosawoti eRussia - ama-pretzels nezinti. Kuhlelwe futhi ukwethula ukukhiqizwa kwamazambane amazambane ngo-2021.
Tags: ukucubungula amazambaneukukhiqizwa kokudla okulula